Last nohavaozina: Jan. 05 2018 | 4 min namaky
Daty ireo dia afaka ho saina ho an'ny olona rehetra fa indrindra fa raha ianao handeha eo amin'ny daty tamin'ny lehilahy mahavariana anao ho tena tia ny hahafantatra sy nefa saro-kenatra sy hafahafa. Dia matetika no zavatra izay ninia tsy nijery. Ny olon-drehetra vao jerena, dia hoatran'ny hoe tokony ho tratry ny ananany, na be herim-po "ny olona", na "ny vehivavy", fa toy ny olona saro-kenatra, ary afaka mijoro ho vavolombelona aho hafahafa fa izay tsy ho mora.
Manana fatiantoka maro toy ny tsy afaka hahalala ny olona, kokoa aza eo amin'ny sisin'ny noho ny olona iray ho eo amin'ny daty ary mety tsy hita avy eo amin'ny fifandraisana izay mety nataonao raha nanao ireo tena anareo nivoaka. Mazava ho azy fa misy tombony ho azy io satria raha ny olona iray tena tia anao dia hanao ny ezaka sy ny dia ho fa tena tia anao. Raha ny marina dia miaina ao anatin'ny mampino izao tontolo izao izay mihazakaza-dava sy izay haingana fotsiny no tsy tonga eo amin'ny fiainantsika matihanina. Mirona hanome fahafaham-hantsana ho any fiainantsika manokana koa fa raha ny olona iray tena tia anao izy dia tsy mampaninona ny ela mitaky ny Woo anao.
Indro, Izaho efa miteny amin'ny ampahany izany momba ny zavatra azontsika atao mba hanatsarana ny fomba tonga eo amin'ny daty aho fa tsy eo ambanin'ny illusions, ary tsy te-hametraka olon-kafa na inona na inona na, fa izany no dingana iray miadana izay mila niasa teo ka azo antoka fa tsy ho tanteraka mandritra ny alina.
Akanjo maneho ianao
Izany no torohevitra izay mety ho tokony hatao ho an'ny olona, ​​na vehivavy handeha amin'ny daty miaraka izany-ka-Enga anie mafana lahy! Fa izany no zava-dehibe kokoa raha saro-kenatra ianao, olona hafahafa. Raha ny marina dia maneho hoe iza isika amin'ny alalan'ny zavatra hanaovantsika na dia eccentric na mihoatra demure ary raha toa ka miezaka mafy ny hifandray iza ianao amin'ny alalan'ny teny dia fomba fiakanjonao afaka manampy ny hametraka niampita ho any amin'ny olona izay tsy afaka miteny eo amin'ny teny. Ohatra raha akanjo tena iray ho hafahafa ny fomba mety haneho tsy hoe na inona na inona fa dia Lady Gaga mpankafy na fa ianao no tena tonga ho azy sy mahafinaritra. Tadidio foana ny akanjo ny fomba ny tenanao, fa tsy ny fomba mihevitra ny vehivavy na ny lehilahy lavorary ho akanjo. Dia tena mora ny ho latsaka ao amin'izany fandrika. Ny tenako aho. Raha mbola ao ny miaraka amin'ny olona izay efa fancied efa miakanjo ny fomba hahatsapa fa izy ireo dia te ahy akanjo, satria tiany aho mba tia ahy fa ny loza ateraky ny izay fa na dia manao toy ny anao ireo tsy tia avy hatrany an'ireo anao ianao, indrindra raha mitady mety ho ela velona dia mety tokony hatao mba havelany hahita izay tianao ny hanao noho izany rehetra izany ny karazana fomba dia ho manao aminy noho ny mandritra ny fiainana fifandraisana.
Raiso tsirairay Sentence Rehefa tonga
Ny ampahany lehibe no saro-kenatra sy hafahafa no overthinking ary mandre be dia be fotsiny fa mila overthinking intsony ny zava-misy. Fa raha izany dia mora fotsiny ny olona manao izany. Overthinking dia zavatra iray izay lasa Rehefa nandinika lalina ny olona iray fa azo resena ny. Izany marina dia tsy tsotra toy izany manjavona rehetra indray mandeha. Tokony haka azy moramora sy eo amin'ny daty iray maka ny fehezanteny tsirairay araka tonga. Miezaka ny tsy hieritreritra mikasika ny daty be loatra mialoha. Fenoy ny saina amin'ny zavatra hafa toy ny rindran-kira, famakiana, TV dia mampiseho, sarimihetsika, rehefa ela. Ny fanalahidy dia ny hitandrina fotsiny ny sainao ho be lavitra ny daty mba ho be ny toetra tonga avy amin'ny daty satria tsy nanam-potoana hieritreretana ny alalan 'ny zava-drehetra izay mety hitranga sy ny fomba tokony hamaly izany sy izay tokony manontany.
Eritrereto Ahoana no mety ho fahatsapanao Mahakasika ity ao anatin'ny folo taona
Mieritreritra mikasika ny fomba dia hahatsapa ny zavatra ao anatin'ny folo taona dia tena fomba tsara ny maha zava-dehibe ny fanombanana ny toe-javatra. Andramo ary eritrereto hoe na dia zava-dehibe sy goavana tahaka ianareo kosa manao azy ho avy. Milaza ianao manao fahadisoana, de maninona? Moa ve izany ho tena mampahatahotra aminao ao anatin'ny folo taona, raha mety ianao dia efa nihaona tamin'ny olona ny nofy? Raha misy olona tsy dia ahafahana mahita fahadisoana vitsivitsy dia ianao no tena te-hiaraka amin'izy ireo? Afa-tsy izy ireo handeha koa ho sahiran-tsaina, ary azo inoana fa tena hanao fahadisoana vitsivitsy tena toy izany koa ny ahatazanana azy sy manantena anao dia tsy raharahian'ny. Tsy te-ho amin'ny olona izay tsy mitsahatra mamaritra anao amin'ny zavatra ratsy. Ahoana ny fiainana izany ho rahateo?
Izany dia tsy hitranga tampoka. Azonao atao mihitsy aza manana fiarahana loza izay mipetraka any, ary tena kely hoe. Fa izany ny fandrosoana rehetra. Niditra tamin'ny zavatra ara-tsosialy maro rehefa nandeha ny fotoana dia afaka ary matoky ny fitenenana dia hanatsara. Ary rehefa manao ny tsara dia ho any olona hihaino raha tsy efa tonga niaraka, ary noravany ireo rindrina, ary rehefa izy no eo amin'ny fiainanao rehetra ireo ahiahy ny fomba tonga manerana sy ny fomba fandraisana ny hahita olona intsony satria Tsy afaka manao izany fifandraisana eo amin'ny fomba mora foana ny hafa toa tsy manan-danja aza. Dia mirary anao ny tsara indrindra amin-kitsimpo ny vintana.